Pre-bid Conference Minutes for Procurement of Spectrum Monitoring System (SMS)
Published: Apr 19 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
Posts and Telecommunications Department(PTD) of Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) holdapre-bid conference (meeting) for Procurement of Spectrum Monitoring System in MCIT on 14th March 2016. The meeting minutes can be found in the following attached PDF file.
စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူသုံးစွဲမည့် ပြည်တွင်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံခြား မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ရွေးချယ်ထားရှိမှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက်..
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် လှိုင်းနှုန်းစဉ် များအား စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်နှင့် လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအလိုက် အသုံးပြုနိုင်သည့် လှိုင်းနှုန်းများကိုသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လှိုင်းနှုန်းစဉ်လျာထားချက် (National Table of Frequency Allocations) အား အများပြည်သူသဘောထား မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရေးဆွဲပြီး..
Questions and Answers of Procurement of Spectrum Monitoring System-SMS (Batch 6)
The Pre-bid meeting for procurement of Spectrum Monitoring System for Posts and Telecommunications Department(PTD) was held in MCIT Office, Naypyitaw in 14th March 2016 and the meeting minutes and questions and answers were posted on the MCIT Website in 21st, 31st March and 6th, 7th April 2016.
PTD is still receiving more questions from some organizations after holding the pre-bid meeting and those questions and answers have been posted on the website as batch (6) together with the previous questions and answers(batch 1,2,3,4&5).
Licence Issued List(26.4.2016)
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မှ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လာရောက် လျှောက်ထားသူများအား ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၍ ၂၆.၄.၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့သော ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်လျှောက်ထား လာသော ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား စိစစ်၍ လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။